China IBS 2020 - 2020 NAHB International Builders 'Show orinasa sy mpamatsy | Shenghang
IBS 2020 - 2020 Fampisehoana mpanorina iraisam-pirenena NAHB
Daty: 21-23 Janoary 2020
Adiresy: 3105 Paradise Road Las Vegas, NV 89109
Ny SHAH INTERNATIONAL BUILDERS 'SHOW 2020 dia iray amin'ireo fampirantiana fitaovam-panorenana lehibe any Etazonia. Ny orinasanay dia faly dia misoratra anarana sy mandray anjara amin'ity fampirantiana fitaovana ity.
Ny fampirantiana fitaovan'ny IBS dia tombontsoa ho an'ny orinasanay amin'ny fampandrosoana ny tsena amerikanina. Amin'ny fampirantiana, isika dia mandalo ny fantsom-pifandraisana mampifandray ny tsena amerikanina mpanamboatra fitaovana sy mpamorona tetikasa, ary mampiditra amin'ny antsipirihany ny vokatra ananan'ny orinasa ho azy ireo, izahay amin'ny alàlan'ny mpanjifa ihany koa mahatakatra ny fitakian'ny tsena amin'ny làlan'ny vokatra vita amin'ny fananganana fitaovana, ary nanasa azy ireo hitsidika ny trano rantsan-tananay.
Nandritra ny fampirantiana dia nahafantatra be dia be ny mpanjifa tao amin'ny indostrian'ny fitaovam-panorenana eo an-toerana ary takatsika ny firoborobon'ny tsenan'ny fananganana eo an-toerana sy ny fangatahan'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fifandraisana.Mba mpanjifa maro no mieritreritra fa ny vokatra azontsika dia mahafeno ny fepetra takian'izy ireo amin'ny fananganana fitaovana. vokatra, ary nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa izahay, manasa anay hitsidika ny orinasan'izy ireo sy hanao fanadihadiana momba ny tetikasa mitohy aorian'ny fampiratiana.
Taorian'ny fampirantiana dia nitsidika ny orinasan'ny mpanjifa izahay tamin'ny fanasana ny mpanjifa, ary niresaka tamin'ny mpanjifa ny fomba fampiasana sy fametrahana ireo vokatra vita amin'ny tranobe eo an-toerana, sy ireo karazana vokatra tian'ny mponina sy ny mpamorona.
Ny mpanjifa koa dia nitondra anay tany amin'ny fitsangatsanganana tetikasa fananganana mitohy ary nampahafantatra anay ireo faritra izay azon'ny vokatra ampiasaina ao amin'ny tetikasa.Later, aorian'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifa dia voatanisa ao anaty antsipirihany ny fifanarahana momba ny fiaraha-miasa ary nanao sonia izany soa aman-tsara. Izahay dia miandry ny hanomboka ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana ny tetikasa rehefa miverina any Sina.
Sampam-by vy vita amin'ny vy, Mpitety tafo fanala, Sheet plastika vita amin'ny plastika, Taratasy vita amin'ny famononam-bary any Galvalume, Tady fandrefesana, Sheet vy voakorontana,